CQ9 စစ်နတ်ဘုရား God of War Slot Game - Myanmar Online Game
Slot ကစားနည်း Theme တွေထဲမှာ အများအားဖြင့်တော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Symbol လေးတွေနဲ့ သာသာယာယာ ရှိနေကြတာများပေမယ့် ဒီနေ့မှာတော့ တကယ့်စစ်ပွဲခံစားမှုမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကစားသူတွေအတွက် CQ9 ရဲ့ Slot Game တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ God of War Slot Game ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ! မှော်မီးမြင်း၊ စစ်လက်နက်၊ ချပ်ဝတ်တန်စာတွေ ကြားထဲကနေ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ နောက်ခံတီးလုံးတွေကြောင့် ပျင်းမနေတော့မှာ အသေအချာပါ။ ပြီးတော့ ဒီမှာအရမ်းကိုထူးခြားတဲ့ အချက်တစ်ခုက Bonus Symbol ကျလို့သာ Free Game ရရှိပြီဆိုရင် ကိုယ်ရရှိမယ့် Free Spin အရေအတွက်ကို ကိုယ်ကိုတိုင်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်! ဘာလို့ ဒီလိုရွေးလို့ရတာလဲ? ဘာတွေကွာခြားသွားမှာလဲ?
ဒီကစားနည်းမှာ 243 Ways ရှိပါတယ်! ကစားသူကလှည့်လိုက်ရင် ကျလာမယ့် Symbol တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ Pay line ကွက်တိကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ ဘယ်မှညာဘက်ကို Reel တိုင်းမှာပါနေမယ်ဆိုရင် ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Symbol တွေပါနေပြီးတော့ Reel တစ်ခုလောက်ကြားထဲမှာလွတ်နေရင်တော့ မရပါဘူးနော်။
ဒီလိုလုပ်ပေးထားတဲ့ ကစားနည်းဟာ ပိုပြီးရိုးရှင်းပြီးတော့ ခေါင်းစားမခံချင်တဲ့လူတွေနဲ့ ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျ။ Pay line တွေပေါ်ကျကျမကျ လိုက်ကြည့်နေစရာမလိုပဲနဲ့ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် နိုင်မှာလား မနိုင်ဘူးလားဆိုတာကြိုတွက်လို့ရလို့ ပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဒီကစားနည်းမှာ Wild ကိုတော့ တံဆိပ်တုံးပုံနဲ့တွေ့ရပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်သလိုအစားထိုးပေး၊ လိုသလိုသုံးလို့ရတဲ့ Wild လေးပါ။ သူကတော့ Reel 2, 3, နဲ့4တို့မှာပဲပေါ်ပါတယ်။
ဖဲမှာဆိုရင်တော့ Joker လိုပဲပေါ့။
Bonus Symbol ကိုတော့ စစ်သူကြီးပုံနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ Reel 3,4နဲ့5တို့မှာပေါ်ပြီးတော့ လောင်းကြေးရဲ့ 5x , 10x, 50x အထိရနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
Bonus Symbol ကျရင်တော့ Free Game ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ရတဲ့ Free game ကရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း Free Spin အရေအတွက်ကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရပါတယ်!
ဒီမှာဘာကွာခြားသွားလဲဆိုရင် ရွေးလိုက်တဲ့ Spin အရေအတွက်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရင် Special Symbol တွေတွဲပေးထားပါတယ်။ ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ Special Symbol တစ်ခုပဲပါပြီးတော့ တခြား Special Symbol တွေမပါတော့ပါဘူး။ ပုံမှန် Symbol တွေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိပါတယ်။ ဒီ Symbol ကို Free Spin လှည့်နေစဉ်မှာ ဘယ်မှညာဘက် ထပ်ပြီးကျမယ်ဆိုရင်တော့ Free Game ကိုနောက်တစ်ခါ Trigger ဖြစ်စေပြီးတော့ Free Spin အရေအတွက်ထပ်ရွေးနိုင်ပါတယ်! Free Game တစ်ခုမှာ Free Bonus ထပ်ပြီး Trigger လုပ်နိုင်တဲ့အများဆုံးကြိမ်ရေကတော့ 10 ခါအထိဖြစ်ပါတယ်။
Free Game 20 မှာပေါ်တဲ့ ဉီးထုပ် Symbol ရဲ့ရမှတ်က –
5ခု – 150
4ခု – 25
3ခု – 10
15 မှာရတဲ့ ချပ်ဝတ်တန်စာရဲ့ရမှတ်က –
5ခု – 200
4ခု – 50
3ခု – 20
12 မှာရတဲ့ စာအုပ် ရဲ့ရမှတ်က –
5ခု – 300
4ခု – 80
3ခု – 40
9 မှာရတဲ့ လက်နက် ရဲ့ရမှတ်က –
5ခု – 450
4ခု – 100
3ခု – 50
အနည်းဆုံ6းမှာရတဲ့ မီးမြင်း ရဲ့ရမှတ်က –
5ခု – 750
4ခု – 150
3ခု – 100
ဒီလိုဆိုတော့ Free Spin အရေအတွက်နည်းလေ ပိုပြီးတော့ ရမှတ်များလာလေပဲဖြစ်ပါတယ်!
ကဲ.. အဲ့တော့ စစ်နတ်ဘုရား God of War Slot ကိုဆော့ချင်နေကြပြီလား? အခုပဲ JDBYG ရဲ့ Slot section ကိုအပြေးလေးလာပြီတော့ စစ်ပွဲဝင်လိုက်ကြရအောင်လား စစ်သူကြီးရေ!